LAPAN’NY TANANA :: Noesorina ireo tranoheva teo amin’ny Parvis Analakely • AoRaha
LAPAN’NY TANANA Noesorina ireo tranoheva teo amin’ny Parvis Analakely
Misy hifandraisana amin’ny hetsika kasaina hatao amin’ny sabotsy ho avy izao ve? Noesorina ireo tranoheva sy ny mpivarotra teny amin’ny Parvis Analakely, omaly.
Raha ny tokony ho izy dia ny 30 desambra ho avy izao izay vao tokony hiala eo amin’io toerana io ireo mpivarotra ireo. Marihina fa tsena natokana ho an’ny Noely na “Bazar de Noel” karakarain’ny “Le Zoma de Tana” nanomboka ny 17 desambra lasa teo izay hifarana ny 30 desambra ho avy izao ireto tsenam-barotra noesorina ireto. Raha ny feo mandeha dia ny avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra mihitsy no nanala ireto mpivarotra ireo teo. Tsy nahazoana fanazavana momba ity fanalana ny mpivarotra ity kosa ny avy eo anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra.
Hatreto aloha dia mbola tazana eny an-toerana ireo karazana kilalao sy tranoheva fampirantiana ary fangalana sary miaraka amin’ny Dadabe Noely. Raha ny fanambaran’ ny tompon’andraikitra misahana ireto kazarana kilalao ireto ihany dia mbola tsy naheno na fampilazana amin’ny tokony hialan’izy ireo eny an-toerana ireto farany. Na izany aza dia mitaintaina izy ireo ireo amin’ny mety hisian’ny korontana sy ny tsy hitohizan’ny asa fitadiavam-bolany.
“Tokony havela hiaina anaty fety am-pilaminana ny olona fa tsy hamboly korontana eto indray. Rehefa fety ihany izahay vao mba afaka manana fitadiavam-bola tahaka izao ka tokony tsy hisy fiantraikany amin’ny asanay ny fihetsiketsehana izay kasain’ny sasany hatao”, hoy ireo mpitantana kilalao eny Analakely.